Daawo: Ra’isul wasaare kheyre oo maanta qabtay shaqadii ugu badneyd abid kadib markii uu…. – Kismaayo24 News Agency
Daawo: Ra’isul wasaare kheyre oo maanta qabtay shaqadii ugu badneyd abid kadib markii uu….
by Tifaftiraha K24 23rd May 2017 028
Muqdisho, 23-May-17–-Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa ka qayb-galey kulan lagu taageerayey Xukuumadda uu hoggaamiyo, waxaan ka soo qayb galay qaar kamid ah Golaha Wasiirada, Madaxwaynaha Maamulka Gal-mudug, Gudoomiyaha Gobolka Banaadir, Dhalinyaro iyo ururada Bulshada.
“Waxaan rabnaa mar walba in ay nala xisaabtamaan shacabka Soomaliyeed si ay u helaan waxey xaqa noogu lee yihiin taasoo ah dawladnimada, si aan u gudano shaqadeena”ayuu yiri R/W kheyre.
Dhanka kale, Ra’iisul Wasaare Xasan Kheyre ayaa la kulmay safiirka Maraykanka u fadhiya Soomaaliya Stephen Schwartz , waxayna ka wada hadleen sidii ay uga wada shaqeyn lahaayeen horumarka, xasiloonida iyo dimuqraadiyadda, tasoo fursad siineysa dadka Soomaaliyeed si loo yareeyo kuwa aaminsan aragtida xag-jirnimada ah.
Ugu danbeyntii, Ra’iisul Wasaaraha ayaa kormeer ku tagay Dekada Muqdisho, gaar ahaan shaqaalaha qeybta Maaliyadda, waxuuna kala hadlay howlaha ka socda Dekeda, isagoo kula dar daarmey in ay la dagaalamaan musuq-maasuqa si loo helo dawladnimo lagu kalsoon yahay.
War hada: Maxay ka dhaheen farmaajo iyo kheyre qaraxii lagu halaagsamay ee xalay ka dhacay……
DEG DEG: Qarax xoogan oo ismiidaamin ah ayaa salaada cisho ka hor ka dhacay bartamaha boosaaso iyo dhimashada oo sii caga cageyneysa…..
DAAWO:Mahdi Guuleed oo si yaab leh u dhigay axsaanka ay dunida u fasho Somalia
Mohamed Abdirashid Abaajo 15th February 2019
Maamulka Iyo Howl-wadeenada K24 Oo Hambalyadda Ciida U Soo Diraya Dhamaan Akhristayaashiisa
Tifaftiraha K24 11th September 2016